Banyere Anyị - Shijiazhuang Keyuan Machinery & Equipment Co., Ltd.
Tọrọ ntọala na 16 Eprel 2001
Shijiazhuang Keyuan Machinery & Equipment Co., Ltd. nke a maara ugbu a dị ka Shijazhuang Keyuan Machinery & Equipment Research Institute, bụ ọkachamara nrụpụta ngwa ọrụ nke Hebei Science and Technology Commission kwadoro, na -ejikọ nyocha sayensị, mmepe, imewe, imepụta na ire. Edebanyere aha ma rụọ ọrụ dịka iwu ahụ siri dị, ọ na -enwe ikike njikwa nọọrọ onwe ya yana ikike ikike ọgụgụ isi.
Kemgbe e hiwere ya, ụlọ ọrụ anyị na mahadum sayensị na teknụzụ Hebei rụkọrọ ọrụ wee rụchaa ngụkọta nyocha 26 na mmepe mmepe na mmemme ise, ma nyekwa ya ọtụtụ akwụkwọ ikike.
Ọ nọ n'ọkwa nhịahụ na China ma nwee oke ọnụ ahịa ọnụ ahịa dị elu ma e jiri ya tụnyere ngwaahịa ndị si mba ọzọ.
Granulator akọrọ bụ naanị ngwaahịa na -eduga na ụlọ ọrụ anyị. Dị ka njirimara nke ụlọ ọrụ ọgwụ. a na -emepụta ya ka ọ gbarisịrị ma rie ngwaahịa ndị mba ọzọ yiri ya ma tụlee ọnọdụ mba China.
Site na otu ndị ọkachamara pụrụ iche na akọrọ akọrọ ihe karịrị afọ iri, ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu.
Ejikọtara Shjiazhuang Keyuan Machinery na Institut Research Institute.
Ihe nrụpụta nke mbụ cantilever kwụ ọtọ granulator nọ na -aga nke ọma.
Shijazhuang Group Hebei Zhongrun Pharmaceutical Co, Ltd. bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta na ụlọ ọrụ anyị, na ụdị nrụpụta mbụ anyị nke ụdị cantilever kwụ ọtọ granulator batara n'ahịa.
Mmezi nke granulator akọrọ nke mbubata maka Huabei Pharmaceutical Group Bida Co., Ltd., bidoro gbarie ma gbanye resuits ot akụrụngwa ndị ọzọ na mba ofesi na -eme ka ọrụ akụrụngwa dị mma yana ọnọdụ nke akụrụngwa ụlọ.
Ọ ghọtara site Hebei Zhongrun Pharmaceutical Co., Ltd.of Shjiazhuang Group na bịanyere aka abụọ tent nke ngwá oraenngt na anyị company.The abụọ na atọ tent nke mmepụta-ụdị cantilever Ọdịdị kwụ kwụ granulators banyere akara Na na-enwe nkwalite na pharmaceutcal , nri na kemịkalụ ụlọ ahịa.ọtụtụ ụlọ ọrụ na -a attentiona ntị na ịtụ.
A na -ebupụ mbụ granulator nnwale nnwale na Spain.
Companylọ ọrụ Alebindu nke India na ụlọ ọrụ anyị bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ịzụta nke mbụ nke cantilever horizontal diy granu.
Kemgbe afọ 2007, ụlọ ọrụ anyị na-enye ihe karịrị ụdị iri nke ndị na-eme ka ihe ọkụkụ kpụ ọkụ n'ọnụ ụlọ ọrụ.
jiangyin Tianjiang Pharmaceutical Co, Ltd.. .
A na-eji ụdị ihe nrụpụta mbụ cantilever kwụ ọtọ granulator maka ngwaahịa ngwaahịa nke ọgwụ ọgwụ tormula nke China, kemgbe 2003, ụlọ ọrụ anyị na-aga n'ihu na-eburu ihe karịrị usoro iri nke ụdị akọrọ akọrọ maka Tianjiang Pharmaceutical.
Anyị mmepụta ụdị cantilever kwụ akọrọ granulator abanyela n'usoro na -eduga ụlọ ọrụ nke omenala Chinese ọgwụ dị ka Dong'e Ejiao na Kangrentang.
Ụlọ ọrụ Keyuan gafere asambodo "ISO9001 Quality Management System" nke ọma.
Shijiazhuang Keyuan Machinery Equipment Research Institute e renamed Shijiazhuang Keyuan Machinery Equipment Co..Ltd.and ya factory kwagara Bishui Street, Ludao Economic Development Mpaghara, Tongye Town, Luquan District, Shijazhuang City.
Mgbe ọtụtụ afọ nke mkpokọta ahụmịhe, nnabata nke ngwaahịa ndị dị na mbubata na nnwale ihe ugboro ugboro, a kwalitela akụrụngwa ahụ ugboro atọ n'ime afọ ole na ole ugbu a, ọ rụọla ọrụ gụnyere Shijazhuang Group.North China Pharmaceutical Group.Sinochem.DSM.Federal Pharmaceuticals, Shandong Lukang, Shanxi Wichida, Qilu Pharmaceutical, na Alaka ọtụtụ narị ụlọ ọrụ ọgwụ gụnyere ụlọ ọrụ na -emepụta ọgwụ dị ka Lun Pharmaceutical, Livzon Group.Tasly.Yili Group.Hainan Haivao na Wu Taigankang